Ye_Minn_Naing's Reading List - Ye_Minn_Naing - Wattpad
Ye_Minn_Naing's Reading List
1.2M 168K 108
(U&Z) သူဟာ အဆုံးမရှိတဲ့ လှတျ​လပျ​ခွငျး​တှနေဲ့ ငါတို့ရဲ့ မနကျဖွနျတိုငျးကို ပြျောရှငျစတေဲ့ သူ ...။ သူက သိပျကို ထူးခွားလှနျးတယျ ...။ Boy Love , own story (Started On _ 5/July/ 2020) သူဟာ အဆုံးမရှိတဲ့ လွတ်​လပ်​ခြင်း​တွေနဲ့ ငါတို့ရဲ့ မနက်ဖြန်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့ သူ ...။ သူက သိပ်ကို ထူးခြားလွန်းတယ် ...။ Boy Love , own...
L❤VE in the 1st sight(Completed)
1.9M 134K 84
UNICODE VERSION: စဈမှနျတဲ့ခဈြခွငျးတရားတှေ ကွီးကယျြမွငျ့မွတျလာခဲ့ရငျ ယောင်ျကြားဘဲဖွဈဖွဈ မိနျးမဘဲဖွဈဖွဈ အဲ့ခဈြခွငျးတရားတှရှေမှေ့ောကျမှာ ဒူးထောကျအရူံးပေးရလိမျ့မယျ....❤ ZAWGYI VERSION: စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းတရားတွေ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာခဲ့ရင် ယောင်္ကျားဘဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဘဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ချစ်ခြင်းတရားတွေရှေ့မှောက်မှာ ဒူးထောက်အ...
420K 54.5K 82
စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းတရားတိုင်း ဆုံဆည်းခွင့် ရှိစေ။ စဈမှနျသောခဈြခွငျးတရားတိုငျး ဆုံဆညျးခှငျ့ရှိစေ။ #Boy Love #Romance #Complete (Zawgyi + Unicode)
Bad Buddy (Myanmar Translation)
-Zawgyi- စာရေးသူ Khun Afterday နဲ့ Khun West တို့ ရေးသားတဲ့ Behind the scenes novel လေးပါ -UNICODE- စာရေးသူ Khun Afterday, Khun West ရေးသားတဲ့ Behind the scenes novel လေးပါ Start Date - 3.01.2021
I ADORE YOU. (COMPLETED)
279K 45.7K 48
I adore you.....💙 Started date - September 3, 2020. End date -December 6,2020. Cover photo crd from pinterest.
ယုံကွညျမှုဆိုတာက မငျးမမွငျရတဲ့ မကျြကှယျမှာတောငျ သူ့အပျေါ ယုံကွညျပေးခွငျးပဲ။ သိင်ျခ ဒါဆို ခငျဗြားကြုပျကို တဈကွိမျတဈခါလေးတောငျ ယုံကွညျပေးခဲ့ဖူးရဲ့လား သိင်ျခ...။ အဓိက ယုံကြည်မှုဆိုတာက မင်းမမြင်ရတဲ့ မျက်ကွယ်မှာတောင် သူ့အပေါ် ယုံကြည်ပေးခြင်းပဲ။ သိင်္ခ ဒါဆို ခင်ဗျားကျုပ်ကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါလေးတောင် ယုံကြည်ပေးခဲ့ဖူးရဲ့လား သိင်္ခ...
White Lotus Senior & Wolf Junior [Original]
93.6K 17.4K 26
A white lotus senior with his wolf junior who hate white lotus.
71.2K 5.4K 60
အခဈြက အခဈြပဲမို့ ဘာကိုမှ ဘယျသူ့မှကွောကျနဖေို့မလိုဘူး
187K 18.4K 12
(ZawGyi & Unicode) "ကြှနျတျောတို့ နှဈယောကျရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးကို မမှနျရဲ့အနုပညာ စိတျကူး နဲ့ ပေါငျးစပျပွီး တခွားသူတှေ ရဲ့ ရငျထဲမှာ စှဲထငျကနျြရဈစခေငျြလို့ပါဗြာ.." မမှနျကိုရငျဖှငျ့လာတဲ့ မောငျလေးရဲ့ စကားတှအေမြားကွီးထဲက စကားတဈခှနျးပါ။ (အကွငျနာမှနျ) "ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို မမွန်ရဲ့အနုပညာ စိတ်က...
864K 75.1K 102
(Unicode & Zawgyi) ပငျလယျနဲ့တူတဲ့ ဘ၀.. လှငေယျနဲ့တူတဲ့ သူ.. မုနျတိုငျးကွားမှာ ခရီးဆကျနိုငျပါစေ..
266K 37.8K 75
ရတယျ။ ကမ်ဘာပကျြတာ သိပျအရေးမကွီးဘူး။ ငါရှိတယျ။ ငါက မငျးရဲ့ကမ်ဘာ။
1.5M 158K 89
(Unicode & Zawgyi) သူက ကြှနျတေျာ့ရဲ့ နှလုံးသားမှာ စိုကျဝငျနတေဲ့.....ဆူး.....။
656K 87K 119
အဒေီ ၇၉ ခုနှဈ .. ပုံပမွေို့.. ရောမအငျပါယာ ဒဏ်ဏာရီမဟုတျတဲ့ ရာဇဝငျထဲက အဖွဈအပကျြလေးတဈခုလား ဒါမှမဟုတျ.. ရာဇဝငျတှငျမကနျြခဲ့တဲ့ ဒဏ်ဏာရီဇာတျလမျးလေးပဲလား... ........ အေဒီ ၇၉ ခုနှစ် .. ပုံပေမြို့.. ရောမအင်ပါယာ ဒဏ္ဏာရီမဟုတ်တဲ့ ရာဇ၀င်ထဲက အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုလား ဒါမှမဟုတ်.. ရာဇ၀င်တွင်မကျန်ခဲ့တဲ့ ဒဏ္ဏာရီဇာတ်လမ်းလေးပဲလား...
Be Passionate About You(Completed)
100K 8K 38
စွဲလမ်းမိသောသူ..... ယောင်္ကျားလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးပုံစံလေးပါ။ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုထူထောင်ပြီးဆို ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အခြေအနေ ပြသာနာ တွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ.... ဘယ်လိုတွေဆုံးဖြတ်ကြမလဲဆိုတာကို ပုံဖော်သွားမှာပါ။
31.1K 2.5K 52
I want to creat beautiful time with you.
Beyond the Eternity (ထာဝရကို ကြျောလှနျ၍)
55.9K 6.7K 44
"တကယျသာ ခဈြကွမယျဆို ထာဝရဆိုတဲ့ အခြိနျက ဘယျလုံလောကျပါလိမျ့မလဲ။ " "တကယ်သာ ချစ်ကြမယ်ဆို ထာဝရဆိုတဲ့ အချိန်က ဘယ်လုံလောက်ပါ လိမ့်မလဲ။" Justasimple love story between the mythical creatures 💖
Romance Is Dead (Completed)
965K 81.8K 75
BOTH Zawgyi and Unicode Zawgyi အချစ်ကနှလုံးသားတံခါးကိုလာခေါက်တဲ့အခါ ချစ်မိနေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ လက်ခံကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိတဲ့ချစ်ခြင်းဟာ တစ်ဖက်သတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ...ဖွင့်ဟဖို့ခက်ခဲတဲ့ချစ်ခြင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ... သူချစ်ရတဲ့သူက ကိုယ်မဟုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ... နှလုံးသားဟာ ဘယ်လောက်အထိများအနာတရ...
194K 32.4K 45
တောငျတောရယျသာ... မာလာကငုံဖူး... တဈပငျကိုနှဈပငျယှကျတယျ... ကြေးငှကျကမွူး...
66.8K 8.2K 40
#Unicode သူ့တဈ​နရော ခဏတာ ဝငျလဲ၍သာ ​ကွညျ့ခငျြသညျ #Zawgyi သူ့တစ်​နေရာ ခဏတာ ဝင်လဲ၍သာ ​ကြည့်ချင်သည်
My Crush Is A Fujoushi
1.3M 119K 49
What will happen when you haveacrush on Fujoushi? Ultimate experiences of beingahardcore Fujoushi.! Cover - @NyaHmwePann Started On - October 2nd 2017
91.1K 5.8K 41
Author's fiction with Boss Lu @Luhan Studio Meeting Room ""Morning""ဆိုသည့်အသံက Meeting Roomထဲရှိလူအားလုံးကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားစေသည်ုကော်ဖီခွက်ကိုင်ထားသောလက်ထဲမှာပင် Script Fileကိုင်လျက်ထိုင်ခုံတွင်ဝင်ထိုင် သည်။Fileကကိုင်သာကိုင်လာတာလေ ဖတ် ကောဖတ်ပြီးရဲ့လား??မသိမသာလှမ်းရှိုး ကြည့်တော့ မျက်လုံးတွေကအိပ်ချင်မူးတူး။...
78.4K 9.8K 10
Uni Lifestyle & GL
247K 26.5K 31
#BOTH WITH ZAWGYI & UNICODE #COVER ARTIST -LucyXellies Artwork is mine and don't allow to reupload. နှလုံးသားက အဖွူစငျခဲ့ဆုံးဆိုတာတော့ ယုံ---
5.4M 337K 62
Hate is suchadim color. You can never see the innocence through it. If there is no hate , you will be able to see the innocence. If you can see the innocence, it's very easy to fall in love . Started On - 10 February 2017
822K 55.1K 55
Written By - May King
တဈ ခါ က သု ဝ ဏ်ဏ ဘု မ်မိ
60.6K 3.9K 33
ပထမဆုံးရေးဖွဈတဲ့ နနျးတှငျးဇာတျလမျးပါ သမိုငျးနှငျ့မညီရငျ နားလညျသညျးခံပေးပါဗြ Jet Li ရဲ့ Heros ကို ဇာတျအိမျမှီငွမျးထားပါတယျ။ ဇာတျလမျးက "ပွနျဆုံမဲ့နေ့" လို အမေး အဖွနေဲ့ ရေးထားပါတယျ ဇာတျလမျးပုံစံအကဉျြးတူတာပါ ကနျြတာတော့မတူပါဘူး ဖတျရှူဝဖေနျပေးပါခငျဗြ
2.3M 220K 64
This story book presented by ZAWGYI & UNICODE. Cover Design By @Moa ZAWGYI ရင်ခုန်စရာ ဇာက်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ငါ အခုပြောပြမယ် ..... ဇာက်လမ်းလေးက ဒီလို စတယ် .......? UNICODE ရငျခုနျစရာ ဇာကျလမျးလေးတဈပုဒျကို ငါ အခုပွောပွမယျ ..... ဇာကျလမျးလေးက ဒီလို စတယျ .......?
Tian Ya Ke (Faraway Wanderers)
1.1M 180K 81
MM translation of Tian Ya Ke (天涯客)(လလှေငျ့ခရီးသညျ) Original author- PRIEST Original novel link: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=912073 Eng translation link: https://www.novelupdates.com/series/faraway-wanderers/ Disclaimer: I do not own any part of the story. All the credits go to original author. Credit to o...
1.6M 232K 84
I love you First! [Own Creation]
396K 48.3K 29
Commission Novel! Two Actors, take part in BL Series and their life entangle because of that. Romance, comedy genre. Story by : Sky & AnnaLynn